တရုတ် Silicon ဇီယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း | Weiai
86-769-2366 7505 / 86-134 2345 4141
Dongguan Weiai အထည်ချုပ် Co. , Ltd မှ
ကိုယ်ပိုင်ကော် backless strapless ဘရာစီယာ
silicone Pad တက်ဘလက်များသည် Up ကို Push
silicone ရင်သား Enhancer
silicone တင်ပါး Pad တက်ဘလက်များသည်
Clear ကို bra သိုင်းကြိုး
silicone မိတ်ကပ် Puff
မမြင်ရတဲ့ Silicon နို့သီးခေါငျးမျက်နှာဖုံးများ
ကိုယ်ပိုင်ကော် Backless Strapless bra
bra Gel Pad တက်ဘလက်များသည် Up ကို Push
silicone မမြင်နိုင်သောကို Magic Push ကို-Up ကို bra
silicone ရင်သားဓာတ်လှေကားမမြင်နိုင်သော bra
Silicon PUSH UP pads
Feature: INVISIBLE & FASHION: Nowadays, strapless silicone bra is constantly needed to improve attractions and confidence of modern feminine Suitable for various: backless dresses, wedding dress, party dress. Our bra is strapless, very soft and clear, the micro edge design and nude color adhesive silicone make it seamless and invisible under your clothing inacomfortable and natural way. Nobody would notice that you are wearing our strapless bra. STICKY AND LASTING STABILITY:Our strap...
FOB စျေး: အမေရိကန် $ 0.1 - 2.8 / Piece
Min.Order အရေအတွက်: 500 Piece
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 900000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
Invisible & FASHION: backless ဆင်မြန်း, မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ, ပါတီဝတ်စုံ: ယနေ့ခေတ် strapless ဆီလီကွန်ဘရာစီယာအဆက်မပြတ်ဆွဲဆောင်မှုများနှင့်အမျိုးမျိုးသောအဘို့သင့်တော်ခေတ်မီဣတ္၏ယုံကြည်မှုတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရာစီယာအလွန်ပျော့ပျောင်းနှင့်ရှင်းလင်းသော strapless ဖြစ်ပါသည်, အသေးစားအစွန်းဒီဇိုင်းနှင့်ဝတ်လစ်စလစ်အရောင်ကော်ဆီလီကွန်တစ်ဦးအဆင်ပြေနှင့်သဘာလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့အဝတ်အစားအောက်မှာချောမွေ့စွာနဲ့မမြင်ရတဲ့ပါစေ။ ဘယ်သူမှသင်တို့သည်ငါတို့၏ strapless ဘရာစီယာဝတ်ဆင်နေကြသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။
စေးကပ်နှင့်နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်မှု: ကျွန်ုပ်တို့၏ strapless ဆီလီကွန်ဘရာစီယာအကြီးမြတ်ဆုံးပခုံးဝတ်ရုံကိုချွတ်ထိုကဲ့သို့သော backless ဆင်မြန်းအဖြစ်မတ်မတ်ဖို့အဖော်, ဇက်စားဆင်ယင်, မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံ, စတာတွေအဘယ်သူမျှမကပိုရှက်စရာပြဘရာစီယာကြိုးဖြစ်ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်, ကျောင်းကပွဲ, ညစာ, ပါတီ, အားလပ်ရက်သို့မဟုတ်အခြားအခါသမယများအတွက်စုံလင်သော။ သင်တို့သည်လည်းပင်နေ့စဉ်ဘရာစီယာအဖြစ်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ Strapless မမြင်ရတဲ့ဘရာစီယာမဆိုဆင်မြန်းပြီးပြည့်စုံ collocation နိုင်ပါတယ်။ သင်ပိုမိုကြော့နှင့်ဆွဲဆောင်မှုအာရုံဖြစ်ကြပါစို့။
သဘာဝအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများ: Strapless ကော်ဘရာစီယာ 100% ဆေးဘက်တန်း silica gel ဟာဖန်ဆင်းသည်, သင့်လျော်သောအထိခိုက်မခံအသားအရေအဘို့ဖြစ်၏။ hypoallergenic ကော်သက်သာနှင့်ဘရာစီယာကိုဖယ်ရှားပြီးနောက်သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမသဲလွန်စထွက်ခွာမည်။ self-ကော် bra အမြဲ, အရပျ၌နေထိုင်ရန်သင့်ရဲ့အသားအရေလိုက်နာ, ကော်၏မဆုံးရှုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုပါ။ သဘာဝဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးပြီးနောက်, Comfortable, လုံခြုံ, ယားယံ၏အခမဲ့, ဆန့်ကျင်မတည့်, တည်ငြိမ်သောကော် PUSH UP bra ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မမြင်နိုင်သောဆီလီကွန်ဘရာစီယာ strapless အလွန်ပျော့နှင့်အဆင်ပြေသည်။ မည်သည့်အခါသမယအဝတ်အစားအဘို့မထိုက်မတန်, လျောက်ပတ်ဒီဇိုင်းကိုပိတ်ပါ, ဘယ်သူမှသင်ထူးခြားတဲ့ရှေ့ကလစ်ဒီဇိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ strapless ဘရာစီယာကိုအလွယ်တကူအပေါင်းအဘော်ပြုခြင်းနှင့် unclasp မှနိုင်ပါတယ် bra.With strapless ဝတ်ဆင်နေကြသည်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်။ လုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့နှင့်သင်တစ်ဦး busty နှင့်ချစ်စရာကောင်းနက်ရှိုင်း v-shaped cleavage ဆောင်ခဲ့, သင့်ရင်သားကိုစုသိမ်းဖို့ကူညီပေးပါတယ်။
အရေးကြီးမှတ်ချက်: ဒါဟာရိုးရှင်းစွာနွေးရေနဲ့အပျော့စားဆပ်ပြာနှင့်အတူကော်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ပြီးတော့သူကအခြောက်မှလေကြောင်းဖို့လိုအပ်မှသာဆေးကြောသန့်စင်ရန်လွယ်ကူသည်။ အကောင်းအားဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုထိန်းသိမ်းရန်အဘို့ဤ strapless ဘရာစီယာပြန်သုံးနိုင်သောနိုင်ပါတယ်။ ကော်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲပြန်သုံးနိုင်သော။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်နှင့်အတူမည်သည့်မကျေနပ်မှုရှိပါကသင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။
သငျသညျစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်သင်ကော်မယ့်တုံ့ပြန်မှုရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာအသေးအပိုင်းအစကို အသုံးပြု. ပထမဦးဆုံးတစ်ဦး patch ကိုစမ်းသပ်မှုလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်အမွေးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင်ကချွတ်ယူတဲ့အခါမှာအဖြစ်အများကြီးထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့သင့်လက်မောင်းများ၏အတွင်းပိုင်းကောင်းတစ်ဦးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင်ကလျှောက်ထားမတိုင်မီသူတို့ကပိုခက်ကသင့်အရေပြားကပ်ရန်အဘို့အရာဖြစ်စေမည်, ထိုဒေသတွင်အပေါ် moisturisers သို့မဟုတ်မှုန်မသုံးပါနဲ့။
သငျသညျတွေအများကြီးချွေးလျှင်ကော်ချောင်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာတစ်ခုဖြစ်, သို့မဟုတ်ကော်သင်အများကြီးချွေးပါဘူးဘယ်မှာဧရိယာ၌တည်ရှိ၏သေချာစေမည်ဆိုပါကထိုသူတို့ကိုသုံးပြီးရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားပါ။
သငျသညျဖယ်ရှားရေးပြီးနောက်သင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်မှာ left စေးကပ်ကျန်ကြွင်းရှိပါကသင်သည်ဂွမ်းအပေါ်အချို့သောကလေးရေနံကို အသုံးပြု. နှင့်ညင်ညင်သာသာပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ။ လက်သည်းဆိုးဆေး remover များကဲ့သို့အရည်များလွန်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်သူတို့ကသင်၏အရေပြားပေါ်မှာအဖြစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့မရှိကြပေ။
ယခင်: self ကော် BACKLESS STRAPLESS ဇီယာ
နောက်တစ်ခု: ရင်သားကင်ဆာသည် LIFT
self ကော် BACKLESS STRAPLESS BRA
self ကော် BACKLESS STRAPLESS ဇီယာ
လမ်းညွှန် ,Hot ထုတ်ကုန်များ ,မြေပုံအညွှန်း ,amp မိုဘိုင်း
ကိုယ်ပိုင်ကော် Backless Strapless bra, bra Insert Up ကို Push, Push ကို-Up ကို Silicon bra , Silicon ရင်သား Enhancer , နိုင်လွန် Strapless Backless bra , Breathable Invisible Bra,